လမသာ ဆက်ရက်တောင်ပံကျုိုး ညအမှောင် သူဝင်တိုး …(မောင်ဖေသက်နီ) – ရှုခင်းသစ် NEW SIGHTS
Posted on August 3, 2014 August 3, 2014 Khin LunnPosted in ဝတ္ထုတို
“ဒေါက်တာအားလူးမုန့်လုံးစက္ကူကပ်သည် သူ့စစ်တမ်းမူကြမ်းကို အချောသတ် လိုက်၏။ ထိုအချိန်ကျမှ သူမေ့လျော့နေတာကို အမှတ်ရတော့သည်။ သူ့စာမူကို စာပေစီစစ်ရေးတင်ရပေလိမ့်မည်။ သွားပြီ ….။ သူရေးထားသမျှ သူကြိုးစားထားသမျှ တော့ သဲထဲရေသွန်ဖြစ်ကုန်ပြီ။”
လမသာ ဆက်ရက်တောင်ပံကျိုး၊ ညအမှောင် သူဝင်တိုး ….
တရေးနိုး၊ အလင်းမဲ့၊ လူ
စဉ်းစားခဲ့သည့်အကြိမ်ပေါင်းကလည်း မနည်းတော့ပြီ။ အဖြေထုတ်ရင်း အဖြေ ကို ရှာမတွေ့ခဲ့တဲ့အဖြစ်။ လူအချို့နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြည့်ခဲ့တာလည်း အကြိမ် ပေါင်း မရေမတွက်နိုင်ခဲ့၊ သူ့လိုပင် တခြားလူတွေလည်း အဖြေကို ကြိုးစားပမ်းစား လိုက်လံ ရှာဖွေရင်း….အမဲလိုက်ရင်း၊ အဖြေကိုမတွေ့သည့်အပြင် အဖြေအတွက် သင့်တင့် လျောက်ပတ်သည့် အစားထိုးနိယာမ (တနည်း) ယထာဘူတကျ နည်း သစ်နိဿယတခုက ထပ်မံတိုးလာခဲ့သည်သာချည့်။ ထိုနိ၏ယကို ခြေရာ ကောက် ကြည့်သောအခါ တခြားသော နိယာမတခု တိုးလာခဲ့ပြန်ရော။
ဘယ်လိုလဲ….၊ ဩဟိုမိုဆေပီယန်ဩ မျိုးနွယ်အုပ်စုဝင်၊ သူအပါအ၀င် ခြေ နှစ်ချောင်းပေါ်ဟန်ချက်ညီညီ တဖက်ချ တဖက်ချီ လမ်းလျှောက်တတ်သည့် မျိုးနွယ် စု၊ ဒါဝင်အဆိုအရ ဩဇင်ဂျန်သရိုပတ်စ်ဩ မျိုးနွယ်အုပ်စုဝင်၊ အသိဉာဏ် ဗဟုသုတ ရှာဖွေတတ်သူ….၊ တဆင့်ပြန်လည် ဖောက်သည်ချတတ်သူ….၊ တခြားသူတို့ အပြစ် အနာအဆာ အားနည်းချက်တို့ကို ထဲထဲဝင်ဝင် ကြည့်မြင်တတ်ပြီး မြိန်ရှည်ရှက်ရည် အတင်းပြောတတ်သူ….၊ အားသာချက်။ ထူးချွန်မှုတို့ကို မျက်စေ့တမှိတ်အတွင်း ဦးနှောက်အာရုံထဲမှ ထုတ်ပယ်ပစ်တတ်ပြီး ထိုသူတို့အကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ပေးဖို့ အကြီးအကျယ် ၀န်လေးတတ်သူ….။ လမ်းလျှောက်တာချင်းအတူတူ စီးထားသော ဖိနပ်ကိုကြည့်ပြီး တန်ဖိုးဖြတ်တတ်သူ….၊ ၀တ်ထားသော အင်္ကျီတန်ဖိုးရှိသလား။ မရှိဖူးလား၊ ခါးကိုင်းပြီး လမ်းလျှောက်သလား။ ခါးမတ်ပြီးလမ်းလျှောက်သလား၊ သူ့လက်မှာ နာရီရှိ။ မရှိ။ သူ့လက်ချောင်းတွေမှာ ရွှေဟူသော လူတွေကိုယ်တိုင် တန်ဖိုးသတ်မှတ်ထားသည့် အ၀ါရောင် သတ္တုလက်စွပ် ရှိ။ မရှိ။ မျက်မှန်တတ်သူ ဖြစ်ပါက မျက်မှန်အမျိုးအစား ကောင်း မကောင်း။ အသက်ရှူတာတောင်မှ လေအေး စက်မှတဆင့် ပျံ့လွင့်လာသည့်လေကို ရှူရှိုက်သူ ဟုတ်။ မဟုတ် ခွဲခြားသတ်မှတ် တတ်သူ….၊ ဆိုက်ကယ်ချင်းအတူတူ အမေရိကန်လုပ် ဩဟာလေဒေး ဗစ်ဆင်ဩ နှင့် ဂျပန်လုပ် ဩဟွန်ဒါဩကို နှိုင်းယှဉ်တတ်သူ….၊ ကားချင်းအတူတူ ဂျာမဏီလုပ် မာစီဒီးဗင့်(ဇ) နှင့် ကိုရီးယားလုပ် ဩဟွန်ဒိုင်းဩကို နှိုင်းယှဉ်တတ်သူ….၊ ဩဟိုမို ဆေပီယန်ဩုပ်စုဝင် မျေက်မျိုးနွယ်စု (တနည်း) ယနေ့ခေတ်လူသား ….။
မမျှော်လင့်သော တနေ့နေ့တချိန်ချိန်တွင် လုံးဝမျှော်လင့်မထားခဲ့သော လူသားမျိုး နွယ်အုပ်စုဝင်အသစ်တမျိုး ပေါ်ပေါက်လာဦးမည်လော၊ ဤနေရာ၌ ခြွင်းချက်တခု တော့ရှိရမည်။ ထောင်စုနှစ်အသစ်တခုထဲသို့ ခြေချနေမိပြီ ဖြစ်သော ကျွန်ုပ်တို့သည် ဥပဒေသတခုကိုပြဋ္ဌာန်းပေးရတော့မည်။ ဘယ်လိုဥပဒေသမျိုးလဲ။ ယနေ့အချိန် အတိုင်းအတာအရ နောက်ပိုင်းလူသားမျိုးဆက်တို့သည် အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီး ဩဟိုမိုဆေပီယန်ဩ လူသားများအပေါ် အီးကောမတ်(စ်) (တနည်း) လျှပ်စစ် ၀ါဏိဇ္ဇဩဗေဒ လွှမ်းမိုးမသွားစေဘဲ အီးဟူးမင်းဘီးယင်း (တနည်း) လျှပ်စစ်လူသား များကို ကိုင်တွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်သူ …. ထိုလူများမှလွဲ၍ အခြားလူများ အသက်ရှင် နေထိုင်ခွင့်မရှိစေရ။ ကွန်ပျူတာခလုတ်များမှတဆင့် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုများကို ဆန့်ကျင်ကာကွယ်နိုင်သူ …. ထိုလူမျိုးများမှလွဲ၍ အခြားလူများ အသက်ရှင်နေထိုင် ခွင့်မရှိစေရ။ စက္ကူများပေါ်တွင် ရေးသားထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ မျက်လုံးများအပေါ်၌ သာ ရေးသားထားသည့် လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေး ကျားမ အသက်အရွယ်မရွေး နား လည်နိုင်သော ဘာသာစကားကိုမတတ်သူများ အသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့် မရှိစေရ။ ဝေါဟာရအဘိဓာန်စာအုပ်ကို အာဂုံဆောင်ပြီး သဒ္ဒါအမှားမှား အယွင်းယွင်း ပြောဆို တတ်သူများ အသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့် မရှိစေရ။ ကျေးငှက်အော်သံများ။ ချောင်းရေစီး သံများကို ဩဘေထိုဗင်ဩ . ဂီတသံလောက် မနှစ်သက်သူများ အသက်ရှင်နေထိုင် နိုင်ခွင့်မရှိစေရ၊ သတ္တုတမျိုး (သို့မဟုတ်) စက္ကူတမျိုးကို လူရုပ်ပုံအမျိုးမျိုး တံဆိပ် ရိုက်နှပ်ထားသည့်အရာဝတ္တုများနှင့် ”အချစ်” ကို တန်ဖိုးဖြတ်တတ်သူများ အသက် ရှင်နေထိုင်ခွင့်မရှိစေရ။
ဤသည်ကား အမေရိကန်ထိပ်တန်း ယေးလ်တက္ကသိုလ်မှ ပီအိတ်(ခ်ျ)ဒီ ဘွဲ့ ရရှိခဲ့သူ မြန်မာနိုင်ငံသား မနုဿဗေဒပညာရှင် “ဒေါက်တာ အာလူး မုန့်လုံးစက္ကူကပ် ”၏တွေ့ရှိချက် နိယာမအသစ်ခု၊ တနည်း ကျေးငှက်။ တိရစ္ဆာန်များနှင့် စကားပြော တတ်သူ။ စီးဆင်းနေသော ရေအလျဉ်၏ဘာသာဗေဒကို နားလည်သူ။ လူအပါအ၀င် အခြားသက်ရှိသတ္တ၀ါတို့၏ မျက်လုံးများအပေါ်၌ ရေးသားထားသည့် ၀ဏ္ဏအက္ခရာ များကို ဖတ်ရှုနိုင်သူ။ မင်ထွက်လိုက် မထွက်လိုက်နှင့် မျက်နှာလိုက်တတ်သည့် ဘောလ်ပင် ဖောင်တိန်များကို ဒေါသအမျက်မထွက်တတ်သူ (တနည်း) သူ့လက် ချောင်းများမှကိုင်တွယ်ထိန်းချုပ်ပြီး ၀ဏ္ဏအက္ခရာပေါ်လာမည်ကို လက်မခံသည့် ဘောလ်ပင်ဖောင်တိန်များကို နားလည်ခွင့်လွှတ်တတ်သူ မနုဿဗေဒပညာရှင် ”ဒေါက်တာ အာလူး မုန့်လုံးစက္ကူကပ်” ၏တွေ့ရှိချက် စစ်တမ်းအသစ်။
အစားထိုးနိယာမ (၁) ဆင်ပွား အပိုင်း (က)
နေရာနှင့်အ၀ှမ်း သစ်တောများရှိသည်ကို လက်ခံနိုင်ရမည်၊ တနည်း လူသား တယောက်. ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် သူကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားသော အကျဉ်းထောင်ရှိ သည်ကို အသိအမှတ်ပြုလက်ခံနိုင်ရမည်ကဲ့သို့ သစ်တောများကိုလည်း အသိ အမှတ်ပြုနိုင်ရမည်။
အစားထိုးနိယာမ (၁) ဆင်ပွား အပိုင်း (ခ)
ဩဟိုမိုဆေပီယန်ဩ မျိုးနွယ်စုဝင်လူတို့သည် မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးထား သော အကျဉ်ထောင်များမှ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ပြီး မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးထား သော သစ်တောများ ပင်လယ်များတလျှောက် နောက်ပြန်လှည့်ရိုး ထုံးစံမရှိဘဲ ရဲဝံ့စွာ ခရီးသွားရဲရမည်။
အစားထိုးနိယာမ (၁) ဆင်ပွား အပိုင်း (ဂ)
ထိုသို့ခရီးသွားရာ၌ ခရီးလမ်းတလျှောက် ဘုရားစေတီ ရှိနေစရာမလို။ ဘုန်း ကြီးကျောင်း ရှိနေစရာမလိုဘဲ မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်စွမ်းရှိရမည်။ ထိုအခါ ကမ္ဘာလောကကြီးသည် မိမိ၏ရှေ့၌ အတားအဆီး အပိတ်အပင်မရှိဘဲ ပွင်းလင်း နေလိမ့်မည်ကို လက်ခံနိုင်ရမည်။ လိုအပ်သည့်အရာကား “ဤခရီးကို ဖြတ်သန်း သွားရမည်” ဆိုသည်ကို မိမိကိုယ်တိုင် လိုလားမှုရှိနေရမည်။
ပြောစရာတခုက ရှိလာပြီ။ သိပ်မကြာသေးမီ ရက်ပိုင်းအတွင်းကပေါ့။ သူ့ထံ လာရောက်လည်ပတ်ပြီးနောက် သူနှင့် မိုင်ပေါင်းများစွာ ဝေးကွာသည့် နေရာဒေသ တခုဆီ ထွက်ခွာသွားခဲ့သော အမျိုးသမီးတယောက်ဆီက စာကို အတိုင်းအဆမဲ့စွာ မျှော်လင့်တမ်းတမိခဲ့ခြင်း အဖြစ်အပျက်။ သူမနှင့် သူ့အကြားတွင် ကပ်ထားသော “ဆူပါဂလူး” လည်းမရှိ။ သူမ၏မျက်လုံးအစုံကို စက္ကန့်အတော်ကြာကြာ စူးစိုက်ကြည့် မိခဲ့တဲ့အဖြစ်က လွဲလို့ပေါ့၊ သူမရဲ့စိတ်ကူး၊ အာရုံ။ အဘိဓမ္မာကိုလည်း သူမသိခဲ့။ ဘယ်သူ့သမီးဆိုတာလည်း မသိခဲ့။ ဘယ်မြို့မှာနေတာလဲဆိုတာလည်း မသိခဲ့။ ထို့ အတူ သူဘယ်သူလဲ၊ ဘာလုပ်သလဲ၊ ဘယ်မှာနေသလဲဆိုတာလည်း သူမ မသိပြန်။ မျက်လုံးချင်း စကားပြောလိုက်တဲ့ စက္ကန့်အချိန်အပိုင်းအခြားကလွဲပြီး သူမနှင့် သူ ဘာမှပတ်သက် ဆက်နွယ်စရာမရှိတော့။ သို့သော် သူမထံမှစာကိုတော့ မျှော်လင့် နေမိပြန်ရော။ သူမအတွက် သူ စာရေးထားတာ ကြာပြီ။ လိပ်စာမသိတော့ အခုထိ မပို့ဖြစ်သေး။ တကယ်တော့ သူ သူမဆီကို နေ့တိုင်းနီးပါး စာရေးဖြစ် စာပို့ဖြစ်ခဲ့ သည်။ ထို့အတူ သူမဆီက စာတွေလည်း သူ့ဆီ နေ့တိုင်းရောက်လာနေသည်။ သူ အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန် အရပ်မြင့်မြင့် သူမရဲ့ တော်ဝင်ခန္ဓာကိုယ်က သူ့အပါးချဉ်းကပ် လာပြီး သူ နားမလည်သည့် ဘာသာစကားဖြင့် စာတွေ ပေးပေးသွားတတ်သည်။ သူမရဲ့ ဘယ်ဘက်နှုတ်ခမ်းပေါ်က မှဲ့ကလေးက သူ့နှလုံးသားကို ကလိလိုက်တာ လေ။ အဲဒီနှုတ်ခမ်းပဲပေါ့။ သူ့ကို “နှာဘူး” လို့ပြောတာ။ သူမရဲ့ စာတွေ ရောက်ပါများ လာတော့ ” သူမကို စွဲစွဲလန်းလန်း ချစ်မိပြီ” ဆိုတာ သူ လက်ခံလိုက်ရတော့သည်၊
အစားထိုး နိယာမ (၂)
ဩဟိုမိုဆေပီယန်ဩ မျိုးနွယ်စုဝင် လူတို့သည် တစုံတယောက်၏ မျက်လုံးပေါ်၌ ရေးသားထားသော ဘာသာစကားကို မလွဲမသွေဖတ်ရှုနိုင်ရမည်။ ထို့အတူ မိမိမျက် လုံးပေါ်၌ရေးသားထားသော ဘာသာစကားကိုလည်း အခြားသူများအား ဖတ်ရှုခွင့်ပြု ရမည်။ ထိုသူများမှလွဲ၍ အခြားလူများ အသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့် မရှုိစေရ၊
မိမိတို့လက်ခံရရှိထားသော လက်ဆောင်တည်းဟူသည့် မျက်လုံးပေါ်ရေးသားထား သော ဘာသာစကားမှလွဲ၍ အခြားသောလက်ဆောင်တို့သည် ထာဝရထိန်းသိမ်း ထား၍မရဆိုသည်ကို လက်ခံနိုင်ရမည်။ ရရှိထားသော လက်ဆောင်တို့သည်လည်း လူတို့နည်းတူ သူတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားသည့် အကျဉ်းထောင်ကို ဖောက်ထွက် လွတ်မြောက်ပြီး သူတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားသည့် သစ်တောများ၊ ပင်လယ်များ တလျှောက် နောက်ပြန်လှည့်ရိုးထုံးစံမရှိဘဲ ရဲဝံ့စွာခရီးသွားတတ်သည်ကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုလက်ခံနိုင်ရမည်။ အစားထိုးနိယာမ(၁)နှင့် ခြားနားသည်ကား အစား ထိုး နိယာမ (၂) ၏ရရှိထားသည့်လက်ဆောင်နှင့် လက်ခံရရှိထားသူ မိမိသည် စီးဆင်းနေသောရေနှင့် ထိုရေပေါ်မှကြာပွင့်ကဲ့သို့ သဟဇာတ မျှနေစေရမည်။ သဟဇာတမျှအောင် ကြိုးစားရမည်။
အီတလီစာရေးဆရာကြီး ဩအီတာလို ကာလ်ဗီနိုဩ ကတော့ ပြောဖူးသည်။ စာအုပ်တအုပ်ဖတ်သည့်အခါ မဖတ်ခင်ကတည်းက ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုအပ် သည်တဲ့။ ခြေထောက်ကို စားပွဲပေါ်တင်ချိတ်ပြီး ဖတ်မလား။ ရသည်။ လမ်းလျှောက် ရင်းဖတ်မလား၊ ရသည်။ မီးလုံးတလုံးရဲ့အလင်းရောင်အောက်မှာ ဖတ်မလား။ ရ သည်။ လရောင်အောက်မှာဖတ်မလား။ ရသည်။ စာဖတ်ရင်းဆေးလိပ်သောက် တတ်လျှင်ဆေးလိပ် မီးခြစ်နှင့် ဆေးလိပ်ပြာခွက်ကိုအပါး၌ ဆောင်ထားရမည်။ ဒါမှ မဟုတ်အိန္ဒိယ ယောဂကျင့်စဉ်အတိုင်း လက်နှစ်ချောင်းကိုထောက်၊ ခြေထောက်ကို အပေါ်ထောင်ပြီး ဖတ်မလား၊ ရသည်။
ကာလ်ဗီနို မေ့နေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ ဒါမှမဟုတ် ကာလ်ဗီနိုသည် အိပ် မက် မမက်ဘူးခဲ့သူရင်လည်း ဖြစ်မည်။ မည်သည့်ပုံစံအနေအထားနှင့် စာဖတ်နေ သည်ဖြစ်စေ၊ ဖတ်နေသူ၏ မျက်လုံးထဲမှ စကားလုံးများကို အခြားတစုံတယောက်က အခြားဘာသာစကားတခုအနေဖြင့် မိတ္တူကူးဖတ်ရှုနေသည်ကို ကမ္ဘာကျော် စာရေး ဆရာကြီး မေ့လျော့နေခဲ့သည်ထင့်။ ကာလ်ဗီနို သေဆုံးသွားသည်က အတော်နစ်နာ သည်။ အသက်ရှင်နေသေးလျှင် ဒေါက်တာအားလူးမုန့်လုံးစက္ကူကပ်နှင့် ဆွေးနွေး ခြင်းအားဖြင့် သူ့နာမည်ကြီးဝတ္ထု ”ဆောင်းညတညအတွင်း ခရီးသွားတယောက်” စာအုပ်သည်ယခုထက် ပိုမိုကောင်းမွန်လာနိုင်သလို ပိုလည်း ဆိုးရွားသွားနိုင်သည်။
ထို့အတူ ရေနံသာခင်ခင်ကြီးသည်လည်း ကုန်းဘောင်ခေတ်နှောင်းပိုင်းတွင် မွေးဖွားလာခဲ့ပြီး သီပေါမင်း၏မျက်လုံးပေါ်၌ရေးသားထားသော စကားလုံးများကို မဖတ်နိုင်ခဲ့၍သာ သီပေါမင်း၏အနှောင်အပွားဖြစ်ခဲ့ရပြီး စုဘုရားလတ်၏ သုတ်သင်မှု ကို ခံခဲ့ရသည်မဟုတ်ပါလော။
ထိုကဲ့သို့ သူတပါးမျက်လုံးများပေါ်၌ရေးသားထားသော စကားလုံးများကို မဖတ်နိုင်သူများ အနာဂတ်ကာလ၌ အသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့်မရှိစေရ။ ထိုအခါ ဣတ္ထိ လိင်ကုန်ကူးမှုကိစ္စနှင့် ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းများလည်း သူ့အလိုလို ရပ်ဆိုင်းသွားပေ လိမ့်မည်။ ထို့အတူ သူတပါးမျက်ရည်ကျပြီးမှ စည်းစိမ်ခံစားတတ် သူများလည်း ရှိတော့မည်မဟုတ်ပေ။ ထိုအချိန်သည် သာယာမှုအတိ ပြီးမည်သာတည့်။
လုံလောက်ပြီ။ ဤမျှလောက်ဆိုလျှင် လူ့လောကတခုလုံး သာယာဝပြောပြီး ဂုဏ်သိက္ခာအပြည့်ဖြင့် ငြိမ်းချမ်းသာယာမည်သာတည့်။
ဒေါက်တာအားလူးမုန့်လုံးစက္ကူကပ်သည် သူ့စစ်တမ်းမူကြမ်းကို အချောသတ် လိုက်၏။ ထိုအချိန်ကျမှ သူမေ့လျော့နေတာကို အမှတ်ရတော့သည်။ သူ့စာမူကို စာပေစီစစ်ရေးတင်ရပေလိမ့်မည်။ သွားပြီ ….။ သူရေးထားသမျှ သူကြိုးစားထားသမျှ တော့ သဲထဲရေသွန်ဖြစ်ကုန်ပြီ။ စာပေစိစစ်ရေးအဖွဲ့သည် သူရေးသမျှ စာလုံးမှန်သမျှ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခွင့်မပြုရဟု အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားသည်မဟုတ်ပါလော။
စာပေလွတ်လပ်ခွင့်ရအောင် စစ်တမ်းတစောင် ပြုစုရမည်ဟု စဉ်းစားအကြံ ထုတ်ရင်း ဒေါက်တာအာလူးမုန့်လုံးစက္ကူကပ်တယောက် တခူးခူး တခေါခေါနှင့် နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်မောကျသွားတော့သည်။ စီးဆင်နေသော ရေနှင့် ထိုရေပေါ်မှ ကြာပွင့်သည်မူ သဟဇာတ မမျှတသည်သာ။ အခြားလူတို့သည်လည်း အခြားအခြား သောလူတို့၏ အားနည်းချက်များကို မြိန်ရည်ရှက်ရည် ပြောဆိုနေမြဲသာ။ စီးထား သောဖိနပ်ကိုကြည့်ပြီး၊ ၀တ်ထားသောအင်္ကျီကိုကြည့်ပြီး၊ စီးနေသော ဆိုင်ကယ်၊ ကားကိုကြည့်ပြီး ဝေဖန်ပိုင်းခြားတန်ဖိုးဖြတ်နေကြဆဲ။ ထို့အပြင် အီးကောမတ်(စ်)၏ လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုကို မသိသားဆိုးရွားစွာ လက်ခံနေသော်လည်း မျက်လုံးများပေါ်၌ ရေးသားထားသော ဘာသာစကားများကိုမူ ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့စွာ ရှောင်ဖယ်နေ ကြဆဲ။
(ဤ၀တ္ထုတိုသည် ၂၀၀၁- ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် လွတ်လပ်သောကလောင်ရှင်များအသင်းမှ ထုတ်ဝေသော ”ရွှေဒေါင်းတောင်” မဂ္ဂဇင်းမှဖြစ်သည်။ ဤ၀တ္ထုတိုရေးစဉ်ကာလက မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်အစိုးရချုပ်ကိုင်ထားသည့် စာပေကင်ပေတိုင်ရုံးဟု လူပြောများသော စာပေစိစစ်ရေးရုံး ရှိစဉ်ကာလဖြစ်သည်။ ယခု စာရေးသူ၏ခွင့်ပြုချက်အရ ဤစာမူကို ပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။)
ဒုတိယမြောက် ခင်ဝမ်းနှင့်ထိတွေ့ခြင်း (မောင်ရင်ငတေ)